China News Industry Factory - Cheap Industry News Supplier, mpanondrana
Ny "antenatenan'ilay" - A Self-mampifandanja ny Scooter hitondra anareo ho azy
Post fotoana: 04-20-2018
Izany Koowheel Electric tena mahay mampifandanja scooter F1 dia mazava fa mavitrika, patanty zava-baovao mahafinaritra lamaody famolavolana, LED miseho lamba mampiseho tanteraka ny bateria sy ny hafainganam-pandeha, Super taitra hisakana ny fiasan'ireny amin'ny 8inch fingotra pneumatic kodiarana. Ankoatra izany, ka ento mora mivalona. Na izany aza, dia afaka manome ny identi ...Lire la suite »
Nahoana Ianao Te A roa Wheel Self ny mampifandanja ny Electric Scooter
Post fotoana: 03-21-2018
Tsy nanana lamaody sasany izay nanana olana tamin'ny bateria anaty rafitra sy ny birao hatao voaroaka. Ny birao ihany koa amin'ny manaiky Mitarika tsikelikely ny aretina Sela Mpandray Hafanana mba hanaraka anao na aiza na aiza ianao manilika ny lanjany ho. Rehefa niakatra ny Swagtron, ny dingana 1 amin'ny fotoana tongotra avy any aoriana. Raha hitranga hiantehitra Ba ...Lire la suite »
Electric Skateboards Mety ho Riders Flying
Post fotoana: 03-15-2018
Rehefa niseho voalohany modely hita ao amin'ny an-tsena, dia efa tokony ho fotsiny ampiasaina ho tompon fitaterana, satria lehibe noho ny rehefa te ho any an-tranon'ny namana iray, ho any amin'ny lise, na hafa commuting. Izany haingana skateboard herinaratra aoriana dia tonga noho ny kapila novakiny, goavana pneumati ...Lire la suite »
Tokony hahalala ireo zavatra ireo eo anatrehan'i mividy E-skateboards
Post fotoana: 03-09-2018
Inona no fanontaniana tokony hodinihina? Mazava ho azy fa ny Safety. Noho izany, isika Koowheel mpamatsy herinaratra skateboards efa nahazo taona, RoHS, FCC UN38.3 mari-pankasitrahana. Toy ny fiara na bisikileta, ireo jiro koa skateboards tsara anefa tokony ho hatrany amin'ny-fikasana mihazakazaka malama. Raha izany angamba ...Lire la suite »
Safety dia herinaratra skateboard orinasa mametraka fanontaniana tsara indrindra?
Post fotoana: 03-07-2018
Momba ny fanamboarana ny skateboard, mety tsy maintsy mandinika sasany ny lafiny fampandrosoana. Raha tianao ny hevitra iray skateboard elektrika, nefa tia ny ankehitriny setup, dia mila hojerentsika eon: voalohany Modular powertrain herinaratra. Ao anatin'ny tontolo dava haingana tahaka ny antsika, ...Lire la suite »
Mividy tsara kalitao sy Cool Electric Skateboard
Post fotoana: 03-02-2018
Ny bateria nasain'i tanteraka amin'ny tokony ho ora 2-3, niantehitra tamin'ny tena Izany dia midika hoe notrohinao mbamin'ny faikany. Mety mihidy na Manokatra ny tananao betsaka araka izay tianao, tsy misy ahiahy izany latsaka na manidina izy. Kosa, fa tsy iray ny maro "faran'izay tsara" sela nanana fahafahana izay manakaiky ny laharana capacit ...Lire la suite »
Aiza no tianao haleha mandeha amin'ny lohataona ity?
Post fotoana: 02-28-2018
Spring avy tsy ho ela, no tianao handeha amin'ny dia lavitra na oviana na oviana? Na te-hivoaka ka hijery tontolo hafa? Ve ianao te-hanome ny tenanao na ny fianakaviana iray mahatalanjona sy ny fialan-tsasatra tonga lafatra? Raha ny valiny dia Eny, azafady hifidy mahitsy amin'ny andro mba hivoaka, dia tsy nampoizina kosa no ho azonao toerana manodidina amin'ny farany ...Lire la suite »
Lava indrindra Journey By Electric Skateboard
Post fotoana: 02-23-2018
Izany dia midika hoe manatrika ny teboka eo amin'izay sendra manao fanavaozana lehibe mba hiavaka ao anatin'ny faritra skateboard ny herinaratra; safidy toy ny regenerative braking sy in-kodia Motors. Ny fanaraha-maso lavitra Wireless azo nieritreritra kely ny malemy anivon'ny tahaka ny vita tamin'ny plastika kely namboariny ary mahatsapa somary Che ...Lire la suite »
Fe-potoana vaovao Commuting-Electric Skateboards
Post fotoana: 02-06-2018
Matetika, noho ny habeny sy ny lanjan'ny skateboards mitondra azy ireo fa resaka. Ny Alemaina-monina ny ankamaroany mpiasa efa ela no te hahalala momba ny "Electro-mivezivezy", izay lehibe olana ara-politika tany Alemaina, ary tena any amin'ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny rehetra Eoropa. Tsy manolotra-notch mpividy voalohany manampy ny ...Lire la suite »
Ny mampirehitra Electric Skateboard On an-tany
Post fotoana: 01-25-2018
Nieritreritra koa izahay, ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra azo ampiharina foana fihenjanan'ny ny rojo fiara. Tsy ny rehetra fotsiny hoverboard fa hoverboards Electric ireo na dia manana ny mety certifications dia azo antoka ny mampiasa - izany dia ahitana ny rehetra tsara indrindra amin'ny ambony indrindra 10 hoverboards voatanisa eto ambany. Na izany aza izy ireo satria de ...Lire la suite »
Tokony ho fantatra alohan'ny miantsena ho Hoverboard
Post fotoana: 01-19-2018
Amin'ny avo-teknolojia tena mahay mampifandanja teknika, avo roa heny fiovaovantsika amin'ny naorina-in gyroscope sy ny fahamaotinana sensor, tena mora ny fandrindràna, fotsiny manova matavy ianao, lanja fo, ny scooter dia flexibly hamindra mialoha, niamboho, ankavia, havanana, ary na dia miverena 360 diplaoma in ny toerana. Ny iray amin'ireo tsara indrindra Fe ...Lire la suite »
Tsy manam-paharoa ny mampifandanja ny samy hafa Self Scooters
Post fotoana: 01-12-2018
Ny mannequin tsy maintsy tapa-kevitra toy ny isan-ny hatsaran'ny ny maotera. Eny, dia handeha vidiny anao vola be, na izany aza maka jereo kely ny fanorenana, ary ny fanorenana, noho ireo porofo kalitaon'ny mampidi-doza ity zazalahy, manontany tena ianao raha sisa na tsia dia mpanova in niafina. Rech mora foana ...Lire la suite »
Mahafinaritra Indrindra Hoverboard ny mampifandanja ny Scooters 2018
Post fotoana: 01-04-2018
Ary koa, ny herinaratra scooter tonga amin'ny loko isan-karazany, ary izany koa dia azo atao ny handravaka amin'ny taratasy izay mahasoa ny cowl ny scratches izay rehetra tampoka toy izany matetika. Mazava ho azy, fa ny karazana izay mety hanafaingana ny anao na aiza na aiza toerana iray ianao izay mikendry ao anatin'ny tsy misy ...Lire la suite »
Ny Electric Skateboard no ho Cool Noely Fanomezana tamin'ny 2018?
Post fotoana: 12-22-2017
Noely ho avy tsy ho ela. Ahoana ny faniriany ao amin'ny taona vaovao? No tadiavinao mahafinaritra sy ny lamaody fanomezana ho an'ny namanao na ny fianakaviana? Angamba ianao nanerana ny sasany amin'ireo kilalao ambony faniriana-lisitra sy ny manodidina rehetra, fanomezana lehibe hevitra, dia mbola tsy afaka mahita avy ny fanomezana tonga lafatra? Raha tadiavinao, som ...Lire la suite »
Karazam-Braking amin'ny Electric Skateboards
Post fotoana: 12-14-2017
Na izany na tsy herinaratra fiara, dia misy maro karazana braking- Kilonga mavitrika, friction, ary regenerative braking. Izy rehetra samy hafa mampiasa fomba lasa miadana kokoa ny fiara teo. Friction Braking friction freins dia mitovy karazana freins izay ampiasaina amin'ny fiara mahazatra. Amin'ny ankapobeny, friction agai ...Lire la suite »
The Best Electric Skateboard Backpacks ho an 'ny Board
Post fotoana: 12-06-2017
Matetika no tsy te-hitondra ny jiro skateboard lavitra ny tanana, ary ny birao kitapo afaka izany zavatra izany mora kokoa ny hanao izany. Tamin'ny birao kitapo, dia afaka ihany koa ny misalasala ny hitondra ny birao mba hiasa mandritra ny orana maraina, ary mbola mitaingin niverina an-trano, rehefa izany sunnier amin'ny hariva. Th ...Lire la suite »
Post fotoana: 11-30-2017
Maro ireo unlicensed hoverboards avy teo hita eny an-tsena, ary tianao ny mba hahazoana antoka anao dia tsy ny iray izay azo antoka ny mitaingina ho anao, na ny ankizy. Ireo hoverboards dia azo avy amin'ny orinasa samihafa tanteraka amin'ny endrika samy hafa sy ny habeny, mba hitsena ny olona takina. The ...Lire la suite »
Electric skateboards mety hanova ny commuting
Post fotoana: 11-03-2017
Amin'ny maha olona velona fenitra mbola hitsangana, bebe kokoa dia aleon'ny olona fanenjehana lamaody sy mora kokoa ny fiainana. Indrindra indrindra youngers, dia maniry ny hijery bebe kokoa ny zavatra vaovao sy mahafinaritra. Noho izany, dia manana fangatahana ambony kokoa ho an'ny fohy lavitra Travel fitaovana. Amin'ny lafiny iray, dia afaka mankafy conv ...Lire la suite »
China Outdoors Sporting Electric Self ny mampifandanja ny Scooters
Post fotoana: 10-27-2017
Izany dia satria ireo fitaovana fivezivezena manokana dia tsy natao ho ela mandeha lavitra, na izany aza dia somary natao mba ho tsotra sy fohy commutes fanampiny mahomby. Ampio ny Bluetooth mankafy tsara asa ny finday sy ny samy hafa milalao Stereo vondrona. Ankoatra ny lafin-javatra ireo, izany hihevahevana ...Lire la suite »
Nahoana ny E-skateboard Dia noraisin'ny Sizzling Ary ianao.
Post fotoana: 10-19-2017
Izany no marina tanteraka, rehefa hoe: tsy manam-paharoa ry zareo, misy ny mitovy karazana dia fantatra amin'ny anarana hoe IOS ao amin'ny tsena sahady. Ireo tanana-maimaim-poana na herinaratra môtô skateboard herinaratra azo nentina tany amin'ny iray tapitrisa toerana, tsy zava-dehibe izay niantso azy. Koowheel vaovao dikan Electric ...Lire la suite »
The Perfect Cheap Off Road Electric Self ny mampifandanja ny Scooter
Post fotoana: 10-05-2017
Ny isan-karazany dia iray amin'ireo fifidianana manan-danja ny fiheverana kosa electrically Powered fiara. Tena mahay mampifandanja scooter ny hafainganam-pandeha ambany-fiara, entam-barotra mitovy amin'ny rehetra mitovy. Mivoatra ny Koowheel, ny Hoverboard K7 dia patented ho toy ny "roa-kodia, tena mahay mampifandanja car.R manokana ...Lire la suite »
Koowheel 2 taranaka e-skateboard mitaingina voalohany
Post fotoana: 09-29-2017
Hi ~ Noho ny Koowheel 2 taranaka herinaratra skateboard Kooboard no voalohany herinaratra skateboard eo amin'ny fiainako, ary zara raha mandany vola mba hividianana toy izany lafo kilalao (ankoatra ny, nividy ny lalana bisikileta miaraka amin'ny "tanjona tsara" ...) ka dia tsy andriny ho any amin'ny valan-javaboary. Ary be aho painf ...Lire la suite »
Post fotoana: 09-22-2017
Miaraka amin'ny herinaratra skateboard dia mafana sady nandray ny ankehitriny ny tanora, raha mbola manana ny biraom-mandanjalanja tsara Electric, izy dia matetika hanao ny sasany DIY araka ny tiany. Vao tsy ela aho mahita ny sasany mangatsiatsiaka DIY skateboard ao amin'ny Instagram. Pace: A E-longboard haingana dia hanampy ...Lire la suite »
The Best Self Hoverboard ny mampifandanja ny Scooter 2017
Post fotoana: 09-19-2017
Ny antony tena miantso ny mampifandanja ny scooter ho "Hoverboard" dia ny hoe mitaingina kosa, dia tahaka ianao manomba santimetatra maromaro mihoatra noho ny ambany. Tsarovy foana nifandray tamin'ny tany. Izany no tena tsara kodiarana roa-jiro tena mahay mampifandanja scooter izay vonona ny hanome lalana more ...Lire la suite »
Holiday lehibe indrindra Trip Fitaovana-Kooboard mangatsiatsiaka ny fiainana
Post fotoana: 09-05-2017
Ny "E-birao" misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena fotsiny manahaka an'ilay hetsika ny malaza, noforonina zana-kazo. Ankehitriny isika dia afaka mahita fa mihamaro ny olona dia latsaka amin'ny fitiavana ity fitaovana Travel. Vao haingana, iray amin'ireo dimy hoverboard Shina ambony marika ireo orinasa fampandrosoana 2 taranaka herinaratra longboard ...Lire la suite »
Post fotoana: 08-23-2017
Ny hoverboard dia noraisin'ny tanora kokoa ny olona, ​​satria izy ireo manam-petra dia afaka nahazo sambatra sy nahafinaritra tamin'ny mitaingina hoverboard, fa ny fomba hanaovana safidy azo antoka tena mahay mampifandanja scooter? Aoka ho fahazoan-dalana telo azo antoka sy tena tsara indrindra ho anareo mahay mampifandanja scooter. Ny voalohany dia ny KOOWHEEL marika Self Balanc ...Lire la suite »
Ity diany dia sady tontolo iainana sy lafo
Post fotoana: 08-07-2017
Isaky ny tonga ny alatsinainy, mpiasa Feno ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka / metro, mampalahelo ny fiainana teny an-dalana, Mino aho fa ny fontsika dia reraka, elaborately ny makiazy, tamin'ny farany dia vonton-hatsembohana eo amin'ny vahoaka. Na dia fitaovana maoderina fifamoivoizana dia isan-karazany, fa tsy mihaona ny vahoaka rehetra; fiara ny fiara, koa manakana; Metro fiara fitateram-bahoaka, ...Lire la suite »
Samy hafa ny Koowheel k8 sy ny tapaka 6.5inch hoverboard
Post fotoana: 07-26-2017
1. Price Koowheel 6.5inch smart balance wheel k8 is cheaper than regular 6.5inch hoverboard on the market. 2. Apearance Koowheel 6.5inch hoverboard k8 has the following features: private mode. Milan designer, which In line with European and American aesthetic habits. HANGHONG Motor (ensure t...Lire la suite »
Moa ve ny tena mahay mampifandanja môtô soa aman-tsara ny mampiasa?
Post fotoana: 07-07-2017
Self fandanjalanjana môtô, na koa fantatra amin'ny anarana hoe hoverboard, tena mahay mampifandanja birao, herinaratra mandanjalanja scooter ho zavatra tena malaza tao anatin'ny taona vitsivitsy. Indrindra fa any Etazonia sy Angletera, dia tahaka ny feno zava-tsarotra sy ny fientanam-po, mahita zavatra mampihomehy avy amin'ny fiainana andavanandro. Ireo 2 kodia jiro môtô manolotra ...Lire la suite »
Iza no milaza ny isan'andro niraharaha tsy afaka ny ho mahafinaritra?
Post fotoana: 07-03-2017
Ianao no mazoto amin'ny Skateboarding fa aoka ho sasatra rehetra nanosika tongotrareo? Misy herinaratra vaovao avy any Koowheel skateboard Shina. Angamba afaka manova ny fomba hifindra. Ny sary manaraka maka ny htfubeck. Misaotra noho ny fizarana azy io. Ny Koowheel herinaratra longboard skateboard noforonina ny sim ...Lire la suite »
Ny toro-hevitra telo ao amin'ny fisafidianana herinaratra skateboard
Post fotoana: 06-27-2017
Ary ny olona bebe kokoa ny teknolojia manana lamaody sy ny fangatahana, rehefa handeha lavitra, dia herinaratra scooter no ilaina fa nanan-tarehy vondrona lavitra. Saingy ho an'ny ankamaroan'ny vokatra vaovao, mahay mampifandanja ny tena vidin'ny scooter lafo kokoa, ka tsy maintsy mitandrina isika rehefa hividy. Efa namintina ny telo singa purc ...Lire la suite »
Inona no traikefa afaka ny herinaratra skateboard hitondra anao?
Post fotoana: 06-06-2017
Ny mahira-tsaina fanitarana ny fialam-boly traikefa Electric Skateboards manana toetra raiki-tampisaka fialam-boly. Tany amin'ny faramparan'ireo taona 1950, ireo mponina ao amin'ny faritra atsimon'i California tora-pasika nanorina fiaraha-monina manerana izao tontolo izao skateboard voalohany. Amin'ny maha-fanitarana hilalao onja an-tanety, Electric Hoverboard efa labiera ...Lire la suite »
Iza Travel fitaovana dia mety ho anao?
Post fotoana: 05-19-2017
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny fohy lavitra fitaterana, ny youngers kokoa mandoa tsara ny mizana scooter, herinaratra scooter, herinaratra scooter sy ny herinaratra skateboard ireo karazana efatra. Ny endri-javatra mahazatra, ankoatra ny herinaratra, ny zava-dehibe indrindra dia portability endrika vaovao sy ny maro hafa, tahaka ny W ...Lire la suite »
Nahoana ny E-skateboard ka mafana sy nandray ny tanora?
Post fotoana: 05-11-2017
Electric Skateboard Feno manjary mahafinaritra sy ny fialam-boly ny tanora maro firenena. Vao haingana, indrindra fa ny ankizivavy maro manomboka hiaraka amin'ny ekipa ity. Na izany aza, ny skateboard mampiasa ireo tovovavy nentin-drazana dia tsy misy, fa mizara roa ny Motors KOOWHEEL D3M Electric skateboard. Toy izany skateboard manana appearan tsara tarehy ...Lire la suite »
Ahoana ny momba ny fiarovana ho an'ny olon-dehibe mitaingina scooter herinaratra?
Post fotoana: 04-17-2017
Ary ny herinaratra môtô lasa malaza safidy ho an'ny fialam-boly sy ny Fitness. Ny tanora mitaingina scooter mandanjalanja ny herinaratra, dia afaka mampihatra ny fifandanjana sy amin'ny endriky mahay, ary afaka hampiroborobo ny fampandrosoana ny cerebellum sy hampiroborobo ny fampandrosoana atidoha, hanatsara ny cardiopulmonary mivezivezy. ...Lire la suite »
Electric mandanjalanja scooter - Asehoy ny lamaody amin'ny fiainana
Post fotoana: 04-05-2017
Fifamoivoizana dia olana lehibe ao an-tanàna, ny tena sarotra ny mitady ny toerana fijanonana, noho izany "fitohanana" Lasa tena fahita teny ho an 'ireo mponina ao an-tanàna. Noho izany, ao amin'io tanàn-dehibe, ny herinaratra hoverboard mora kokoa ho lavitra, indrindra fa amin'ny fahavaratra sy ny ririnina, ...Lire la suite »